Safal Khabar - मानिसभन्दा कति गुणा बाठो हुन्छ काग ? (यस्ता छन् ५ कारण)
मानिसभन्दा कति गुणा बाठो हुन्छ काग ? (यस्ता छन् ५ कारण)
सोमबार, १९ कार्तिक २०७५, १३ : १८
आजबाट तिहार सुरु भएको छ । तिहारको पहिलो दिन आज काग तिहार हो । मानवजाति र कागबीच अनौठो सम्बन्ध छ । तिहारको पहिलो दिन आज कागको पूजा धुमधामले गरिएको छ । मानिसहरु कागलाई मृत्यु र खराब कुराको संकेतको रुपमा पनि हेर्छन् । ‘शूभ बोल’ भन्दै सूचना बहाकको रुपमा पनि कागलाई लिएको पाइन्छ । विभिन्न देशमा भएको अध्ययन अनुसन्धानले काग मानिसभन्दा धेरै गुणा बाठो भएको पुष्टि गरेको छ ।
बाठो नं १
कागले मान्छेको अनुहार चिन्छ
तपाइँ कागको हुलमा गएर एउटा कागलाई हेर्नूस् । हेरिन्जेल चिन्नुहुन्छ । एकछिनपछि यताउता हेरेर पहिला हेरेको कागलाई हेर्नूस् त चिन्नुहुँदैन । सबै काग उस्तै हुन्छन् । एकछिनमै चिनेको काग एकछिनमा कुन हो कुन जस्तो हुन्छ । क्या फसाद ! चिनेको काग हुलमा हराउँछ । पहिला देखेको काग तपाइँले भेट्नै सक्नुहुन्न तर त्यो काग त्यो हुलभित्रै हुन्छ । पहिला जुन कागलाई देख्नुभयो, त्यो कागलाई तपाइँले नचिने पनि उसले तपाइँको अनुहार देखिरहेको हुन्छ । सीएटल विश्वविद्यालयले गरेको अनुसन्धानले कागले मान्छेको अनुहार चिन्छ भन्ने पुष्टि गरेको छ ।
अध्ययनका क्रममा विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकले ७ वटा कागलाई समातेर उनीहरुमा एउटा चिनो लगाएका थिए । कागलाई समाउँदा र चिनो लगाउँदा वैज्ञानिकले छालाकै रंगको मास्क लगाएका थिए । समूहमा छोडिएका ७ वटा कागले जतिपटक मास्क लगाएका ती वैज्ञानिकलाई देखे । वैज्ञानिकमाथि खनिए । यो अध्ययनले कागले हरेक मान्छेलाई चिन्छ भन्ने मात्र पत्ता लागेन, कागले बदला लिन्छ भन्ने पनि पत्ता लाग्यो ।​
बाटो नं २
पुस्तकहरुमा एउटा कथा पढ्न पाइन्छ । गाग्रोमा आधा पानी छ । तिर्खाएको काग पानी खान आउँछ । गाग्रोको आधा पानी उसको चुच्चाले भेट्न सक्दैन । कागले पानी खान नपाएपछि एकएक ढुंगा टिपेर गाग्रोमा भर्दै जान्छ । पानी माथिमाथि आउँछ । चुच्चाले भेट्न सक्ने भएपछि कागले कलकल पानी खान्छ ।
यो कथा बालपुस्तकहरुमा चर्चित छ । तर यो कथाको वैज्ञानिक पुष्टि भएको छैन । यसैलाई आधिकारिक पनि मानिँदैन । तर पछिल्लो चरणमा कागको एक प्रजातिमाथि गरिएको अनुसन्धानले यो कथामा भनेभन्दा पनि अझ बाठो काग रहेको पुष्टि भएको छ ।
कागमाथि अध्ययन गर्ने शोधकर्ताहरुले प्रारम्भिक चरणमा एउटा तारमा मासुको टुक्रा बाँधेर कागले कसरी समस्या समाधान गर्छ भनेर हेरे । यो अध्ययनमा कागलाई एउटा सानासाना ढुंगा भएको कोठामा राखिएको थियो । त्यही कोठामा पानी भएको ट्यूबमा कागले नभेट्ने गरी गड्यौला राखियो । यो अध्ययनको क्रममा दुईवटा कागले दुईपटक ट्रिक पत्ता लगाउन प्रयास गरे र अरु दुईवटा कागले पहिलो प्रयासमै सफलता प्राप्त गरे । यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा कागले आफ्ना गल्ती र खराब प्रयास मात्र पत्ता लगाएनन्, उनीहरुले ट्युबबाट बढी पानी बाहिर निकाल्न र गड्यौला भेटिने गरी ठूला साइजका रोडा समेत हाले ।
बाठो नं ३
कागको ‘काँ काँ’ सल्लाह
एक बैज्ञानिकले काग समाते । एकछिनमा समातेको कागलाई छोडियो । उसले ‘काँ काँ’ गर्दै साथीहरु बोलायो । एकछिनमै ती वैज्ञानिकमाथि सबै काग खनिए । वैज्ञानिकहरुले के पत्ता लगाए भने ‘काँ काँ’ कागको हल्ला होइन, सल्लाह हो । उनीहरु ‘काँ काँ’ भनेर एकआपसमा कुरा गर्छन् । आपत प¥यो भने सबै काग एकछिनमा जम्मा हुन्छन् ।
अध्ययनकै क्रममा देखियो कि एउटा समूहको कुनै कागले तपाइँलाई कहिल्यै देखेको छैन तर समूहको कुनै एउटा कागलाई तपाइँले केही नराम्रो गर्नुभएको छ भने तपाइँलाई सबै कागले चिन्छन् । किनकि तपाइँको बारेमा एउटा कागले अरु सबै कागलाई ‘काँ काँ’ गरेर बयान गरिसकेको हुन्छ । यो समूहमा मात्र नभएर जेनेरेसनसम्म पुग्छ । त्यसैले तपाइँले एउटा कागलाई ढुंगा हानेर धपाउनु भएको छ भने त्यसको सन्तानसम्मले तपाइँलाई चिन्छन् । त्यतिमात्र हैन, कागले तपाइँलाई नदेखे पनि तपाइँले कागविरुद्ध गरेको षडयन्त्र आवाजबाटै थाहा पाउँछ ।
बाठो नं ४
क्यानडाको ओन्तारियो प्रान्तको चथाम् भन्ने ठाउँमा कागहरुले आफ्नो बसोबास सुरु गरे । आफ्नो बसाइँसराइको रूट त्यही राज्यलाई बनाए । फार्मिङका लागि प्रख्यात ठाउँमा लाखौंको संख्यामा कागहरुको आवजतावत हुन थाल्यो । राज्यको फार्मिङमै असर भयो । फलस्वरुप त्यहाँका मेयरले सबै काग मार्ने घोषणा गरे ।
त्यो बेला चथाम्‌मा कम्तीमा ६ लाख काग रहेको अनुमान गरिएको थियो । ६ लाखमध्ये कम्तीमा ३ लाख काग मार्ने योजना थियो । तर काग समुदायले यो षडयन्त्र थाहा पायो । काग मार्ने घोषणा भएकै दिन शिकारीहरु काग मार्न हिँडे तर जम्मा एउटा मात्र काग मार्न सके । त्यो वर्ष राज्यले त्यही एउटा कागभन्दा बढी मार्न सकेनन् ।
एउटा काग मरेको हल्ला काग समुदायमा यति छिटो फैलियो कि सबै कागहरु त्यहाँबाट भागे । ६ लाख कागमा जम्मा एउटाको मात्र मृत्यु भयो ।
बाठो नं ५
काउन्टर र इन्काउन्टरको योजना
धेरैलाई योजनामा खासै चाख हुँदैन किनकी योजना बनाएपछि काम गर्नुपर्छ । मानिसमात्र नभएर प्रायः जनावरले योजना बनाउँछन् तर यी सबैमा काग अगाडि छ । काग अवसरवादी चरा हो । कागले कुनै कुरा खानेकुरा खाइरहेको छ भने उसले जहिले पनि अर्को कागबाट लुकाउँछ ।
यदि अरु कसैले देखेको वा हेरेको थाहा पायो भने यसले आफूसँग केही नभएको अभिनय गर्छ । अझ उसले खानेकुरा आफ्ना खुट्टातिर लुकाएको नाटक गर्छ तर वास्तविकतामा उसले खानेकुरा आफ्नो छातीमुनि लुकाएको हुन्छ । जब काग खानेकुरा बोकेर उड्छ तब अर्को हेरिरहेको काग उसलाई पछ्याउन थाल्छ । उसलाई थाहा हुन्छ कहिलेकाहीं बाठो हुँदा बल्ड्यांग खानसक्छ । यसले काउन्टर र इन्काउन्टरको स्थिति पैदा गर्छ । (स्रोतः क्रायक्ड)
१. संखुवासभामा पहिरो जाँदा ११ जना बेपत्ता, ८ घर पुरिए
२. सुनको मूल्य तोलामा ९२ हजार १ सय रुपैयाँमा कारोबार
३. बबई नदीको बाढीमा बगेर दम्पत्ती बेपत्ता
४. महोत्तरीमा बाढी कहर : जताततै जलमग्न, जनजीवन अस्तव्यस्त
५. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले लगाए मास्क
६. इन्द्रावती नदीमा बालकसहित तीन बेपत्ता
७. बाढीले बगाउँदा एकजनाको मृत्यु
८. रोनाल्डोले युभेन्टसलाई हारबाट जोगाए
९. बानेश्वरमा माधव नेपालसँग विष्णु पौडेलले किन गरे चार घण्टा गोप्य भेट ?